ဟွန်ဒါဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ကို - Nantong ပုရွက်ဆိတ် Machinery Co. , Ltd မှ
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » ဟွန်ဒါဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ကို
ဟွန်ဒါထဲမှာစတင်ပါ 1948 စက်ဘီးအင်ဂျင်ပါဝါကိုထုတ်လုပ်ရန်, ရန်ခဲ့သည် "အိပ်မက်" တစ်ဦးမောင်းနှင်အားအဖြစ် "ကုန်စည်" တစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပုံစံကမိုဘိုင်းယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးများကိုဆက်လက်.
"တစ်ဦးချင်းစီကိုလေးစား", တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်း \_ 's ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အရေးပါမှု, အရှင်ဟွန်ဒါတစ်ဦးလေးစားဖန်တီးမှုန်ထမ်းများကိုဖွဲ့စည်းခွင့်ပြု, ကျယ်ပြန်အခမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှု. ယခု, ဟွန်ဒါအသေးစားအင်ဂျင်ကနေဘုံဖြစ်လာပြီ, ဆိုင်ကယ်နှင့်နင်းကားတစ်စီး, နှင့်အခြားလယ်ကွက်မူရင်းနည်းပညာများ, နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆက်လက်, အသစ်သောထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်မှု.
ရှေ့ဦးစွာ မှစ. အကျိုးတူ, ဟွန်ဒါတစ်ဦးအတွက်ခဲ့ "ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု," အဆက်မပြတ်သူတို့အမှုကိုဖွင့်များ၏စိတ်ကူး။
"ဘယ်လိုဒေသခံဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနိုင်" ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်, ဒေသခံကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထူထောင်နေတဲ့ကျယ်ပြန့်ရောင်းအားကွန်ယက်များကိုသာ, ထို့အပြင် system ကိုသတ်မှတ်ထားအသစ်သောထုတ်ကုန်များ၏ဒေသခံတစ်ဦးကထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးထူထောင်.
လက်ရှိအချိန်မှာ, ဆိတ်ကွယ်ရာဂျပန်ကနေ, ဟွန်ဒါ 29 ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း 120 ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်များက, ကားတစ်စီးနှင့်ယေဘုယျထုတ်ကုန်, အဆိုပါနာယက၏အသီးအသီး, အဖြစ်အများအပြား 17 သန်းပိုပြီး.
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ဟွန်ဒါမှာလည်းတက်ကြွစွာလူမှုရေးတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ကော်ပိုရိတ်နိုင်ငံသားအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး, နှင့်တက်ကြွစွာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးဖြေရှင်းနည်းများစူးစမ်း.
ယနေ့ \_ 's အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများ ပို. ပို. ထင်ရှားတဲ့, ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဟွန်ဒါ, လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, အဆိုပါထုတ်လွှတ်မှုသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်အောင်မြင်ရန်ကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ်များနှင့်စွမ်းအင်ပြဿနာများကို၏အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်းကို, လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုလျှော့ချပါ, ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, "အစိမ်းရောင်စက်ရုံ" နှင့်မွေးစားကမ္ဘာမြေ \_ 's ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့အစီအမံတစ်ခုစီးရီးအပြုသဘောပံ့ပိုးမှုများကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ထုတ်လုပ်သူများကမိုဘိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတွက်, ဟွန်ဒါမဟုတ်မှသာလေယာဉ်အမှုထမ်းကိုလည်းလမ်းသွားလမ်းလာများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပါ, ပို. ပင်လုံခြုံရေးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, တက်ကြွစွာလုံခြုံမောင်းနှင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, နှင့်အခြားအဝေးရောက်လုပ်ငန်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့, ပိုပြီးချမ်းသာကြွယ်မိုဘိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ရန်, နှင့် unremitting အားထုတ်မှုအောင်.